ओलीलाई प्रचण्डको चेतावनीः अर्को चलखेल गरे राजनीतिबाट बाहिर निकालदिन्छु — Imandarmedia.com
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिबाटै बाहिर निकालिदिने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पदबाट अदालतले हटाएका ओलीसँग प्रचण्ड अझै पनि रुष्ट नै देखिएका हुन्।
उनले आफ्नो पार्टी र आफूसँग धोका दिएका कारण ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याएको दाबी गरे। उनले फेरि पनि चलखेल गरे ओलीलाई राजनीतिबाटै बाहिर निकालिदिने पनि चेतावनी दिए। शनिबार पश्चिम नवलपरासी पुगेका उनले भनेका छन्,‘ओलीको घमण्डका कारण गण्डकी र लुम्बिनीको सरकार गुम्यो।
२ र ४ दिनमा बागमती र प्रदेश १ बाट पनि बाहिरिंदै छ। अब पनि चलखेल गर्न खोजे राजनीतिबाटै बाहिर गर्दिन्छु। उनले हिन्दीमा भाषण गर्दै मधेसी जनताको अधिकारका लागि आफू संघर्षरत रहेको पनि बताए। उनले भनेका छन्,‘मधेसी जनता मेरा प्रेमिका हुन्। कहिले काहीं भिलेन आएर प्रेमलाई तोड्न खोज्छन्। तर म निरन्तर तपाईंहरुकै अधिकारका लागि लडिरहेको छु।
यसैगरि, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रचण्डपथ छाडेका कारण पार्टीमा टुटफुट आएको बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोक–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रचण्डपथले विचार र संगठनलाई केन्द्रीकरण गरेको तर त्यसलाई छाड्दा टुटफुट आएको बताएका हुन्।
उनले पार्टीलाई जननियन्त्रित र जननिर्देशित रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘जनताको आदेशमा चल्ने पार्टी चाहियो। नेताले गरेका गल्तीमा जनताले औंला ठड्याउन पाउनुपर्‍यो। हामीले गरेका गल्ती उपर जनताले भण्डाफोर गर्ने मौका पाउनुपर्‍यो। यस्तो खालको पार्टी बनाउनुपर्‍यो।
अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अबको पार्टी विधि र पद्धतिमा आधारित भएर चल्छ। सफ्टवेयरको जमाना छ। प्रविधिको प्रयोग गरेर नेता कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गरिन्छ।’संगठन विभागको प्रस्तावमा स्थायी समितिले ‘देश बनाऔं टोलबाट, पार्टी बनाऔं सेलबाट’ भन्ने नारा पारित गरेको भन्दै उनले यसलाई देशभर अभियानको रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पार्टीको पक्षमा ३० लाख संगठित जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ त्यसको लागि संगठनात्मक फर्मुला समेत तयार गरेको उनको भनाई रहेको छ।नेता शर्माले अबदेखि पार्टी र जनसंगठनहरूका हरेक कमिटीहरू आर्थिक उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा अनिवार्य रूपले जोडिनुपर्ने बताए।
हरेक कमिटी र हरेक व्यक्ति आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएपछि मात्र समाजवाद आउने भएकोले पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी आन्दोलन अघि बढाउन आग्रह गरे। अर्थमन्त्री शर्माले अब नेपालमा बन्द भएका उद्योगहरू चलाउने, नयाँ उद्योग धन्दा खोलेर रोजगारी सृजना गर्ने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने गरी सरकारले नीति बनाएको जानकारी दिए।
यसैगरि, सरकारले आर्थिक विधेयक पास गरेर कालो धनलाई सेतो बताउन बाटो खुला गरिदिएको नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले आरोप लगाएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा पुराना वामपन्थी नेता ओम कोइराला नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले नेकपा एमालेले संसद् भवनमा विरोध गर्दागर्दै जबरजस्ती विधेयक पास गरिएको बताए।
नेता नेम्वाङले नेकपा माओवादी केन्द्रतर्फ संकेत गर्दै सरकारले द्वन्द्व कालमा लुटपाट गरेर राखिएको धनलाई बाहिर ल्याउने प्रशस्त बाटो खाली गरेको आरोप लगाए।‘लाख, करोड हैन अरब पैसा ल्याउनुहोस् कुनै श्रोत देखाउनु पर्दैन। यो भनेको लुटपाट, डकैती गरेर, अवैध सम्पत्तिलाई सेतो बनाउ भन्न खोजेको हैनरुण्द्दज्ञड उनले प्रश्न गरे।
एमालेको विरोधका बीच विधेयक पास गरिनु गलत भएको उनले बताए। ‘अहिले म सुन्दै छु, नेपालको सम्बन्धित प्रतिनिधि मण्डल जाँच गर्न आउँदै छ। यदि यो गलत रहेछ भनेर कालो लिष्टेट गरिदियो भने हाम्रो हालत के हुन्छ रु,’ उनले भने।
उनले संविधानको मर्म विपरित सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए। उनले जनभावना विपरित कदम भएको टिप्पणी गरे। कार्यक्रममा कोइरालाले लेखेका ‘राजनीतिक जीवन यात्रा र राजनीतिक लेखहरु’ पुस्तकको लोकार्पण गरिएको थियो।
तस्तै, न्यायोचित वितरणको प्रणालीलाई अंगाल्न नसक्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी छन्। तनहुँमा शनिबार कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाक्रीले हरेक नागरिकलाई मेरो राज्य भन्ने अनुभूति गराउनुपर्ने बताइन् ।
शुक्रबार मात्रै शपथ ग्रहण गरेकी उनले भनिन्, ‘हरेक नागरिकलाई मेरो राज्य मेरो सरकार भन्ने प्रत्याभूति गराउने कर्तव्य राजनीतिको हो । त्यसमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्छौँ ।’शक्तिको पछाडि विकास नदौडने उनको प्रस्टोक्ति छ। आफ्नै पार्टीका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठको ‘तनहुँमा विकासको लहर ल्याउने’ उद्घोषमा असहमति जनाउँदै भनिन्।
तनहुँले मन्त्री पायो विकास यहीँ मात्र दौड्ने, हुम्लाले के गर्ने? गुल्मीले मन्त्री पायो विकास त्यहाँ हुने, पर्वतले के गर्ने? म सामाजिक न्यायको कुरा गर्छु । जहिलेदेखि राजनीतिलाई बदल्नुपर्छ भन्ने बुझे त्यहीँ बेलादेखि म न्यायोचित वितरण प्रणालीको पक्षमा छु।’यसअगाडिको दुई तिहाईको सरकारले वितरण प्रणालीमा न्यायोचित वितरण नगरी अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेकाले विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खोलेको मन्त्री झाँक्रीले स्पष्ट पारिन्।
अनुभवका हिसाबले आफू नयाँ भए पनि अन्धाधुन्ध काम नगर्ने उनको जिकिर छ । उनले भनिन्, ‘राजनीतिले कसरी गति लिन्छ, कहाँबाट प्रवेश गरेर कहाँबाट निस्कन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले केही न केही गरेर जानेछौं ।’ उनले सरकारमै रहे पनि भ्रष्टचार, कुशासन, गैरजिम्मेवारपन र तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने दाबी गरिन्।